Tallaabo uu qaaday Trump oo xiisad ka dhex dhalisay Mareykanka iyo Yurubta - Caasimada Online
Home Dunida Tallaabo uu qaaday Trump oo xiisad ka dhex dhalisay Mareykanka iyo Yurubta
Tallaabo uu qaaday Trump oo xiisad ka dhex dhalisay Mareykanka iyo Yurubta
Washington (Caasimada Online) – Midowga yurub, Canada iyo Mexico ayaa sheegay iney ka aarsanayaan Mareykanka canshuurta uu ku soo rogay biraha iyo alumuniumka waddamadaa laga soo geliyo.
Canshuurta uu mareykanka ku soo rogay alaabadaasi waddamadaa ka soo galo waxuu ku dhawaaqay saqdi dhexe ee caawa xilliga Washington.
Britain ayaa waxay sheegtay iney go’aanka Mareyknaka uu qaatay ay “aad uga niyad jabsan tahay” kaddib marki ay toddobaadyo wadxaajood arrintani ku saabsan ay u socdeen labada dhinac.
Ra’isal wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa wuxuu canshuurta uu soo rogay Mareykanku uu ku tilmaamay “mid aad u xun” taasoo waxyeelleyneyso xiriirrka dheeraa ee u dhaxeeyey Canada iyo Mareykanka, gaar ahaanna kumannaanka askari ee u dhashay dalka Canada ee ka garab dhintay iyaga ka garab dagaallamaya ciidamada Mareykanka ee ku sugan dalka Afqaanistaan.
Go’aanka Mareykank ayaa la filayaa inuu dagaal ganacsi oo hor leh uu ka dhex abuuro Waddamada Midowga Yurub, Canada iyo Mexico.